Alto's Adventure, mutambo wekutanga wekutsigira iyo haptic injini yeiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Muna 2015, Apple yakaparura iyo iPhone 6s uye iPhone 6s Plus nemitambo mikuru yemakamera akavandudzwa uye iyo 3D Kubata skrini. Kana iri skrini ine kumanikidzwa kuzivikanwa, yaiperekedzwa nemota kuendesa mhinduro yemuviri patakadzvanya zvakaringana, semuenzaniso, mumasaini senge Peek naPop.Iyo yaive nhanho yekutanga uye gore rino iyo iPhone 7 / Plus yasvika nayo itsva haptic injini ichazunguzika zvakanyanya uye muzviitiko zvakawanda. Mumwe wemitambo yekutanga yekuwedzera rutsigiro rweinjini nyowani yaive Alto's Kuzeza.
Kana iwe wakamboedza iyo iPhone 7 zvakakwana, iwe unenge wave wakasimbisa kuti, semuenzaniso, kana iwe uchifambisa chaiwo mavhiri ekumisikidza iyo nguva kana zuva, vibration inoburitswa, ndiko kuti, muiyo iPhone 7 uku vibration kwakakosha kupfuura mhando dzakapfuura. Zvakanaka, izvi kutsva kutsva Yakawedzerwa mune yazvino Alto's Adventure yekuvandudza uye zvakaitwa kutinyevera isu patinoita zvimwe zvinhu.
Alto's Adventure inodedera kana isu tichiita zvimwe zvinhu
Semuenzaniso, mutambo unounza haptic mhinduro patinotora rimi kana kutsvedza pane chimedu chefambisi yechando. Zvinoenderana nevagadziri vemitambo, izvi zvakawanikwa Kutenda kune injini nyowani, ine simba kupfuura iyo inowanikwa muiyo iPhone 6s. Ini pachangu, ndinofunga kuti, kunyangwe zviine simba shoma, kudedera uku kunogonawo kunge kwakawedzerwa mumamodeli akaunzwa muna2015, asi ndinofungidzira kuti Apple ichave yakadzora iyo "kukoka" isu kuti titenge iyo iPhone 7 kana iPhone 7 Plus.
Kana iwe usingazive, Alto's Adventure ndeye mumhanyi mhando mutambo, kureva kuti, yeavo vane hunhu hwafanirwa kufambira mberi nekufambira mberi isu tichingofanira kubata sikirini kuti iite kusvetuka. Kana iwe uchida iyi mhando yemutambo, Alto's Adventure ndeimwe yeakanyanya kufarirwa, kunyange iine mutengo we € 3,99.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Alto's Adventure, mumwe wemitambo yekutanga kutsigira haptic injini ye iPhone 7
KUSVIRA TOPIC: Vakadzima teregiramu chiteshi kubva kuActualidad iPhone?
Mhoro Sebas. Tiri kutsvaga. Tinotarisira kudzoka munguva pfupi.
Tinokuunzira iwe 6 majeti kuti uwane zvakanakisa kubva kuIOS 10